Deco Ribbon Craft Ribbon Curler Shredder: Ihe niile gbasara rịbọn shredders
Kedu ihe bụ Ribbon Shredder?
Ribbon shredder bụ ngwá ọrụ ịkwanye na curling nke na-ejide usoro dị mfe nke plastik. Ọ nwere ahịrị ezé ígwè ma ọ bụ rọba nke a na-etinye n'agbà elu iji dọkasịa rịbọn dị ka ihe ị chọrọ.. Agba dị n'okpuru na-ewere ọdịdị nke oghere ma na-atụ anya ịnakwere onye na-ejide sprint. Nke rịbọn shredder na-ejide aha dị iche iche n'ahịa dị iche iche. Nke a nwekwara ike mara dị ka rịbọn cutter, ihe eji achọ mma, igwe mpe mpe akwa rịbọn, rịbọn stripper, rịbọn curler, curler, rịbọn mini slitting tool, Ribbon shredder tool ma ọ bụ rịbọn slitter.
Ụdị Ribbon Shredders dị iche iche dị na Ahịa
Enweela ọtụtụ ọdịiche agbakwunyere na ngwa ọrụ a mara mma. N'ihi ya, ọ bịala n'ahịa n'ụdị dị iche iche. Enwere rịbọn shredders na ígwè ezé n'agba elu na kwa rịbọn splitters na ezé plastik. Ọ kwesịkwara kwuru na nke a nchịkọta nke Ribbon shredders na-agbatị ruo akụkụ abụọ rịbọn shredder na ngwá ọrụ curling, rịbọn slitter, rịbọn shredder curler kwa, rịbọn shredder mpempe akwụkwọ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ihe ndị ọzọ gbasara rịbọn shredders
Ngwá ọrụ a mmadụ mere bụ iji mee ka ihe dị mfe ná ndụ. Karịsịa mgbe ị na-emeso curls rịbọn na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ị kpebie ịkpụ ma ọ bụ tụgharịa rịbọn ahụ site na iji mkpa, ọ ga-ewe gị awa iji gụchaa akwụkwọ ahụ. Ihe na-adịwanye mfe na nke a dị ịtụnanya rịbọn shredder ebe ị ga-ejiri rịbọn dị mkpa site na ngwaọrụ ahụ. Nsonaazụ dị nnọọ ịtụnanya. Enwere ike iji ngwá ọrụ a mee ihe dị iche iche dị ka ihe mkpuchi onyinye na ihe ịchọ mma oriri na ọṅụṅụ site na iji rịbọn dọwara adọka.
Ngwá ọrụ a dị mma ma nwere ike inyere gị aka kewaa ma jiri naanị obere dọpụta rịbọn ahụ. Ọ dịghị mkpa ka ị gaa na nke ọ bụla ọkachamara onyinye wrappers nke party decorators iji nweta ọrụ rịbọn. Ngwá ọrụ a na-akwalite mkpuchi ihe onyinye DIY na ihe ịchọ mma rịbọn maka ndị mmadụ.
Dị na agba na ụdị dị iche iche
Ngwá ọrụ a dị mfe na-abịa n'ụdị agba na ụdị dị iche iche na ahịa. Pallet imewe gụnyere otu akụkụ, akụkụ abụọ, ígwè ma ọ bụ plastic ezé. Ekwesiri iburu n'uche na nke ọ bụla n'ime ụdị ndị a nwere ike inye iwu ma ọ dịkarịa ala 4 agba agba na nke ọ bụla nke imewe. Mee ka egwuregwu rịbọn gị sie ike ma maa mma site na iji ngwa a dị ịtụnanya.
Okwesiri iburu n'uche na 2 A na-atụ anya na ụdị ọhụrụ ga-abịa n'ahịa n'oge adịghị anya. Modelsdị ndị a dị elu ka nọ na ngalaba mmepe ma a na-atụ anya ka ha nwee nhọrọ ọhụrụ mara mma nke nwere ike ịba uru n'ezie
Atụmatụ dị ịtụnanya na uru nke ngwá ọrụ a dị mfe
Ngwá ọrụ a na-enyere gị aka ịmepụta onyinye ịtụnanya pụrụ iche na okike. Ngwá ọrụ a anaghị eri ọtụtụ ohere na ibu dị arọ karịa ka ị tụrụ anya ya. Ị nwere ike ịpịnye ngwá ọrụ a n'akpa gị ma ọ bụ akpa gị iji buru ya ebe ọ bụla ị na-aga. Ụdị ezé dị ịtụnanya na agba elu na-enyere gị aka ịdọrọ rịbọn n'enweghị nsogbu. Ngwaọrụ a nwere ike ịba uru n'oge ekeresimesi. Ị nwere ike iji nke a chọọ onyinye ekeresimesi mma site na iji bounce na curling ribbon mmetụta. Ị nwekwara ike ịmepụta shreds mara mma na ngwugwu onyinye. Ngwá ọrụ a dị mfe na-arụ ọtụtụ ebumnuche. Ekwesiri ighota na i nwere ike kewaa rịbọn n'ime eriri balloon site na iji ngwa a wee jiri ya mee ememe ncheta ọmụmụ pụrụ iche ma ọ bụ oriri agbamakwụkwọ.. Jikọọ aka na onye isi ahịa iji nweta ịdị mma nke ọrụ rịbọn dị ịtụnanya.
RSPAC- Onye ndu na Ribbon Shredders
RSPAC bụ onye isi ahịa n'ichepụta na ịzụ ahịa dị elu Ribbon Shredders. Onye ahịa na-ahọrọ ika a karịa ndị ọzọ n'ihi ịdị irè nke ngwaahịa ha na-arụpụta. Ị pụghị ichetụ n'echiche ka ị ga-adaba n'ọdịdị ị nwetara na onyinye gị na iji anwansi ndị a rịbọn shredders. Ha bụ ndị isi ahịa na njide ụdị ngwaahịa a 94% òkè n'ahịa. Nke a bụ ngwaahịa kacha mma ịnwe n'ụlọ gị. Ọgbọ ochie na-eji nwayọọ nwayọọ na-agbanwe na ndị a rịbọn shredders site na usoro ọdịnala nke ha na-agbaso kemgbe ọtụtụ iri afọ.
Ihe ịchọ mma dị elu na ọnụ ahịa kacha nta
Agafeela ụbọchị ị ga-emefu nnukwu ego na ihe ịchọ mma onyinye na rịbọn ndị ọzọ metụtara masterpieces. Nke rịbọn shredder curlers na-abịa n'okpuru akara aha RSPAC, na-eme ka ndụ dị mfe maka ndị ọrụ rịbọn nọ n'ebe ahụ. Mpịakọta rịbọn ahụ na-enye ọdịdị ọhụrụ na nke pụrụ iche na nkewa na eriri nke rịbọn. Ị nwere ike ịkwakọ onyinye gị na ọnụ ahịa dị mfe. RSPAC kwadoro ogo ngwaọrụ ndị ahụ. Tinye ọmarịcha na agba na mmemme gị site na iji rịbọn shredder RSPAC rụpụtara ma zụọ ahịa.
Onye ọ bụla na-enwe mmasị ka emelite ya na usoro kachasị ọhụrụ na mkpuchi ihe onyinye na ihe ịchọ mma ụbọchị ọmụmụ ndị ọzọ. Nke a metụtara balloons ịchọ mma maka oriri ụbọchị ọmụmụ pụrụ iche. Naanị ha ga-atụgharị uche ha na ngwaahịa a ka ha wee mee ihe a na-apụghị imeli. Ị nwere ike ime bounces na curls site na iji rịbọn dị ka nkọwa gị si dị n'ime obere sekọnd ole na ole. Enwere ike iji ngwa ndị a naanị iji mee ka akpa akwụkwọ mee ifuru na mpịachi site na iji rịbọn.
RSPAC na-enye gị ọtụtụ nhọrọ na nke ọ bụla n'ime nhọrọ ndị a ga-enye gị mmepụta pụrụ iche na enweghị atụ. Onye ahịa nwere ike ịdabere na ngwaọrụ ndị a na-ere n'okpuru akara RSPAC. Ha bụ ndị na-ewu ewu maka ndị na-enwe mmasị ịga n'ihu na usoro ọhụrụ. Ha na-adabere kpamkpam na "okwu ọnụ" ahịa ebe onye ahịa na-atụ aro ngwaahịa maka opekata mpe abụọ ma ọ bụ atọ nwere ike ịzụrụ.. Nke a bụ ụdị ewu ewu ha nwetara kemgbe ọtụtụ afọ.
Ọrụ rịbọn gị nwere ike ịghọ ọmarịcha ọmarịcha n'ime obere sekọnd ole na ole. Naanị ihe ọ chọrọ bụ a rịbọn shredder na ụzọ okike aka ime anwansi. Tinye agba na ihe ịchọ mma na ndụ site na iji ihe ịtụnanya a Ribbon Shredder RSPAC rụpụtara ma zụọ ahịa.
Site Charles Wong|Julaị 18, 2017|Uncategorized|Gbanyụọ na Deco Ribbon Craft Ribbon Curler Shredder
Banyere Onye dere ya: Charles Wong